मैले आफ्नो जीवनमा हजार्ड जस्तो उत्कृष्ट खेलाडीसँग खेलेको छैन : पवार्ड – Khel Dainik
मैले आफ्नो जीवनमा हजार्ड जस्तो उत्कृष्ट खेलाडीसँग खेलेको छैन : पवार्ड
एजेन्सी । विश्व विजेता फ्रान्सका स्टार डिफेन्टर बेन्जामिन पवार्डका अनुसार चेल्सीका बेल्जियन सुपरस्टार इडन हजार्डको ड्रिबलिङ निकै प्रभावशाली रहेको बताएका छन् ।
पवार्डका अनुसार अन–फिल्ड स्किल्समा लियोनल मेसी नै हजार्डको समकक्षमा रहेको बताउँछन् । २७ बर्षिय स्टार विंगर हजार्ड आप्mनो कलात्मक खेल, ड्रिबलिङ, स्पिड र बल कन्ट्रोलका लागि माहिर मानिन्छन् । हजार्डको तुलना वर्तमान फुटबलका दुई हस्ती फुटबलर लियोनल मेसी र क्रिष्टियानो रोनाल्डोसँग पनि हुने गर्छ ।
Big praise for Eden Hazard pic.twitter.com/dTBQhqaEN1
हजार्ड रसिया विश्वकपमा सबैभन्दा प्रभावशाली खेलाडी मध्ये एकका रुपमा समेत रहेका थिए । उनले विश्वकपको २१ औं संस्करणमा सिल्भर बल समेत जितेका थिए ।
उता फ्रेन्च डिफेन्डर पवार्डले पनि रसिया विश्वकपमा फ्रान्सका लागि राईट–ब्याकमा खेल्दै आफ्नो प्रभाव छोड्न सफल भएका थिए । उनले प्रिक्वाटरफाइनलमा अर्जेन्टिनाविरुद्ध फ्रान्सले हात पारेको ४–३ को जितमा उत्कृष्ट भली गोल समेत गरेका थिए । त्यो गोलसँगै सन् १९९८ मा लिलियन थुरामपछि विश्वकपमा गोल गर्ने पहिलो फ्रेन्च डिफेन्डर समेत बनेका थिए ।
Benjamin Pavard: “Honestly Eden Hazard is the best player I’ve ever played against. He hasacrazy talent,asick thing. He’s the best dribbler in the world along with Messi.” pic.twitter.com/9utRqZetsx
— Football Tweet (@Football__Tweet) July 22, 2018
सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै यी फ्रेन्च डिफेन्डरले हजार्डबारे भनेका छन्, “म कुनै एक्सक्युज दिन चाहन्न । साँचो भन्ने हो मैले आफ्नो जीवनमा इडन हजार्ड भन्दा उत्कृष्ट खेलाडीसँग खेलेको छैन । मलाई लाग्दैन मानिसहरु उनको त्यो शानदार क्षमतालाई बुझ्न सक्छन् ।
मैले लिले (फ्रेन्च क्लब) मा पनि उनलाई खेलेको देखेको थिएँ । त्यतिबेलादेखि नै उनी शानदार थिए । तर उनीविरुद्ध खेलेर मलाई उनको साँचो क्वालिटीबारे थाहा भयो । उनी लियोनल मेसीका साथ विश्वका उत्कृष्ट ड्रिबलर हुन् । जब तपाईं उनीविरुद्ध खेल्नुहुन्छ तब सबैकुरा यति छिटो भईदिन्छ कि तपाईंले केही थाहा पनि पाउनुहुन्न ।”
← च्याम्पियन्स कपमा लिभरपुलको हार (भिडियोसहित) मार्शललाई अनुबन्ध गर्ने योजनामा बायर्न र चेल्सी ! →